Jean-Yves le Drian: Nitondra fanazavana momba ny anton-diany teto ny ministeran’ny Raharaham-bahiny malagasy
lundi, 24 février 2020 22:12
Nanao fanambarana, androany, ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny malagasy mikasika ny fitsidihana nataon’ny minisitra Frantsay misahana an’i Eorôpa sy ny Raharaham-bahiny, Jean-Yves le Drian, teto Madagasikara ny 20 sy 21 febroary 2020 lasa teo.
Mba ho fisorohana ireo ahiahy, na koa tsy fitovian-kevitra maro isan-karazany, hoy ny fanambarana dia manamafy ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny fa « tsy fanelingelenana velively, na sakana amin’ireo dingana tanterahana momba ny dinika miaraka amin'i Frantsa, momba ny famerenana ny Nosy Malagasy aty amin'ny Ranomasimbe Indianina, ny fitsidihana nataon’ity minisitra Frantsay misahana an’i Eôropa sy ny raharaham-bahiny ity. Vao mainka aza nanamafisana indray, ny toeran’i Madagasikara sy ny heviny momba io olana io ».
Nampahatsiahy ny ministera fa « fanambarana iombonana navoakan’ireo Vaomiera manokana misahana ny dinika Nosy malagasy nandritra ny fivoriana voalohany notanterahin’izy ireo, ny 18 novambra 2019, ny hoe : "Ny famerenana ny fiandrianan’i Madagasikara amin’ny alalan’ireo Nosy ireo no fototry ny fifampiraharahana, sy mandrafitra ny fifampiresahana mialoha, handinihana sy hankatoavana ny vahaolana iombonana ho an’ny fampandrosoana".
« Mitohy hatrany ireo ezaka ataon’ny fanjakana Malagasy, amin'ny alalan’ny dingana mifanaraka amin’ny lalàna iraisam-pirenena, izay tanterahin’ireo Vaomiera manokana misahana ny dinika Nosy malagasy ireo, hitakiana ny fiandrianam-pirenena feno sy ny famerenana ireo Nosy ireo ».